トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Izici - ukubona ngokusebenzisa indlela namagagasi ROM ngokuvamile ukuphila
Pachinko umshini we ROM, isikhathi namandla, ngokuvamile isikhathi, ihlukaniswe ukuwa isikhathi. Uma kuqhathaniswa isizini eqinile futhi isikhathi kabi, kungase ukuphila Jwayelekile we tshela nzima. Timphawu letitsite, ezifana isizini eqinile futhi ecasukile-ukuphila, kunzima ukubona yingoba kungcono ukuphila okuvamile. Ngo
, kuyoba kuphela isibonelo onjani nokuthi izinto zenzeka esikhathini ROM zezici ukuphila okuvamile, kodwa bayofaka.
esikhathini okuvamile, noma ze-njalo, ukuthi noma umlutha kuba ngokujulile ngeke kakhulu wazibona. Ukusho ukuthi, ngaphandle yokuthi akayena lo ncamashi kwagadla, izinto kuphela uthi iyaheha kakhulu akuyona. Ngamagama zokukhiqiza, njll, ifinyelela futhi ukukhiqizwa futhi uyaphuma ngendlela yalo.
Nokho, umphumela ofuna ukunakwa kakhulu ukukhiqizwa futhi sifinyelele, ezifana kuthiwa super hot.
Kwaphuma ezihlukahlukene ukufinyelela kuyinto njalo, akukho ngaphansi kunamathuba amancane phandle okukhulu Atsu ukukhiqizwa futhi sifinyelele. Futhi, ijubane ukujikeleza afika ku hit, ekubeni ngaphambi nangemva okuyisilinganiso sabangu-300 °, ngisho nekususa nangempela ngayibamba, kukhona futhi iqiniso lokuthi omunye-off. Ngisho noma wokudonsa emuva
isikhathi ukunciphisa noma ukungabe besaqhubeka nokukhokha, ematfuba ukushintshashintsha une futhi kwenzeka ukuthi ayivaliwe kalula. isimo okunjalo kuyoba isici sokuphila evamile ROM. Ukukhuluma njengesifenqo
, Angazi kuthathe ngaphezu utshalomali igolide, kuba isimo okungahambisani ngisho ukwenza imali. Uma waya Kunalokho, esikhathini okuvamile, hhayi mhlawumbe futhi yokuthi ngesikhathi stop okunzima ukuyiqonda.
ngisho noma zikhona izimpawu ukuphila okuvamile enjalo, ngoba lokho kwakuyosho ukulahlekelwa kakhulu jaha, kufanele uqaphele. Khona-ke, ngo-igrafu idatha esimweni ukuphila okuvamile ezinjalo, nazi kahle ubone igrafu line.
isikhungo line ukuma wave lingaphansi eduze Ishadi lomugqa Kuyaphawuleka ukuthi kancane umlutha. Nasesizweni, ngokwesilinganiso, kuwubufakazi bokuthi noma kuphindwe phandle. Esimweni esinjalo kukhona ukugeleza idatha, ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi liye langena enkathini evamile linganquma ukuba okusezingeni eliphezulu Wena.
Jwayelekile ukuphila umlutha kodwa futhi kulula ukudlala ngoba kancane, uzothola ukuthi kungenzeka ukungena kwenkathi ukuwa ngemva kwalokhu. Kodwa ngisho noma kukhona izimpawu zokuphila ezivamile, 300 uma ukujikeleza umlutha wayo iye ilandelwe noma, esimweni ukukhiqizwa futhi ukufinyelela is ayisekho, ngakho kukhona kungenzeka ukuthi uye wangena
isikhathi ecasukile, itafula ukunyakaza ngisho noma ucabanga ukuthi ucabanga yinto enhle ukwenza. Ngokuphambene nalokho, ukuthi kukhona kungenzeka ukuthi uthuthele kwesikhathi eqinile, ngokuvamile isikhathi. Kuye ngokuthi isimo phambi igagasi ukuphila okuvamile, Angazi noma ekutheni egatsheni.
kusukela zama hit Noma kunjalo, ngenxa yokuthi Ngicabanga ukuthi kuba isimo lapho kungenziwa yahlulelwe isimo, sesibe hhayi ubuhlungu ukugeleza zama hit. Uma Minukere ukuphila okuvamile kahle, kukhona izinzuzo ezingase ukufunda esikhathini esizayo isisekelo ukugeleza.
noma babe kunjalo zonke ujabule Lapho okungasizi lutho noma umcabango noma babe engenamsebenzi ukucabanga ukuthi Atsu squid, phela, ngoba ngokuvamile yenziwe ukuthunyelwa yakhombisa ubuvila ukuthi wenkokhelo ngeke indiza ngaphandle nako kuyanda, hhayi nge sputter futhi closeout futhi, kufanele uqaphele ngoba yayingeke ibe khona isikhathi ukwenza ibhola ngaphandle kwesinye etafuleni.